Waa Maxay Sirta Ku Duugan in Murayad Laga Dhigo Wiishka Loo raaco dabaqyada dhadheer ee Fooqyada casriga Ah | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Waa Maxay Sirta Ku Duugan in Murayad Laga Dhigo Wiishka Loo raaco...
Waa Maxay Sirta Ku Duugan in Murayad Laga Dhigo Wiishka Loo raaco dabaqyada dhadheer ee Fooqyada casriga Ah
– Qof kasta oo mar uun isticmaalay wiishka korontada ku shaqeeya ee dabaqyada dhaadheer lagu koro (Lifter) waxaa hubaal ah inuu arkay in derbiyadiisu ay yihiin muraayad uu qofku iska arki karo, laakiin waxaa laga yaabaa in aynaan is weydiin sababta qolkan yar muraayadda loogu xidhay.
War uu Geeska Afrika ka soo xigtay shabakadda wararka ee Rusia today ayaa lagu sheegay in sababta muraayaddan loogu xidhay qolkani ay tahay dejin la dejinayo xaaladda nafsiga ah ee qofka wiishka saaran. Bilowgii markii la ikhtiraacay wiishkan dabayqada dhaadheer lagu koro, waxaa soo baxday cabasho ay dadku ka sheeganayaan xawaaraha uu ku socdo oo ay saluugeen. Xeeldheereyaashii arrinta xal u heliddeeda loo saaray ayaa markii ay dhinacyo badan ka eegeen ugu dambayntii soo bandhigay in arrintaas xalkeeda ugu fiicani uu yahay in qolka wiishkan lagu derbiyadiisa lagu xidho muraayad, si qofku uu ugu mashquulo. Waxa ay sheegeen in sababta ugu badani ee dhibta keenaysay ay tahay qofka oo ilbidhiqisyo gudahood kaga daalayey eegmada afarta derbi ee ku xeeran, isuna arkayey qof xidhxidhan, laakiin markii muraayad laga dhigay ay taasi keentay in qofkii uu ku mashquulo is daawasho iyo in muuqaallada malo-awaalka ah ee ay afarta muraayadood isugu falcelinayaan ay meesha u ekeysiinayo meel furan oo ka weyn inta ay run ahaan tahay.
Xeeldheereyaashu xalka kale ee ay soo bandhigeen waxa uu ahaa in aad loo kordhiyo xawaaraha uu ku socdo wiishku, laakiin markii dib la isula eegay taladooda waxaa lagu qancay in la qaato taas hore ee ah in muraayad laga dhigo derbiyada, waxa aana soo baxday natiijo loo bogay oo ah in qofka fuushani uu daawashada ku illaawayo xawaaraha iyo waqtiga uu wiishkan ku qaatay. Waana xeelad aad uga kharash yarayd talada kale ee ahayd in wiishashka farsamo ahaan dib loogu noqdo si xawaarahooda aad loogu kordhiyo.
Previous articleTaariikh Nolaleedkii fanaanada sahra axmed jaamac oo Xaqu Ugu Yimid hargaysa
Next articleJawaari oo fariin Adag uu Siiyay janaka Ciidamada Amizon, Lagana Yabo in uu Is casilo,